सलमानका कारण बलिउडको ४ अर्ब के होला ? – Gorkha Sansar
सलमानका कारण बलिउडको ४ अर्ब के होला ?
गोर्खा संसार २०७४, २२ चैत्र बिहीबार २२:१३
सलमान जेल गएसँगै ‘रेस ३’को १०० करोड ‘भारत’को २०० करोड ’दबंग ३’को ८५ करोड गरी बलिवूडको ३८५ करोड दाउमा लागेको छ । बिहीबार सलमानलाई जोधपुरको अदालतले ५ वर्षको जेल सजाए सुनाएसँगै बलिउडको ३ अर्ब ८५ करोड संकटमा परेको हो ।
बिहीबार कालो हरिण सिकार मामिलामा सलमान खानलाई दोषी ठहर गर्दै जोधपुर अदालतले ५ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । जोधपुरको स्थानीय अदालतका मुख्य न्यायाधीश देवकुमार खत्रीको इजलासले वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअन्तर्गत सलमानलाई दोषी ठहर गर्दै ५ वर्ष कैद फैसला गरेको हो । फैसलामा सलमानलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । फैसलासँगै सलमानलाई जोधपुरको सेन्ट्रल जेल चलान गरिएको छ । यद्यपि सलमानका वकिलले जमानतका लागि अपिल गर्ने बताएका छन् । अदालतले अन्य आरोपी सैफअली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्र र निलमलाई भने सफाई दिएको थियो ।
सन् १९९८ मा फिल्म ‘हम साथ साथ है’ सुटिङका क्रममा जोधपुरनजिकै कंकाणी गाउँसहित ३ अलग अलग स्थानमा हरिणको सिकार गरेको आरोपमा सलमानविरुद्ध २० वर्षदेखि जोधपुर अदालतमा मुद्दा चलिरहेको थियो । उनी अहिलेसम्म ४ पटक जोधपुर जेल गई सकेका छन् । सन् १९९८, २००६ र २००७ मा गरी सलमान कुल १८ दिन जेलमा बसिसकेका भारतीय समाचारहरुमा उल्लेख छ । सलमानका वकील हस्तीमल सारस्वतले बिहीबार नै जमानतका लागि निवेदन दिएका थिए । तीन वर्षभन्दा बढिको सजाय भएकाले सेसनकोर्टमा शुक्रबार बिहान सुनवाई हुनेछ ।
१९९८ सालमा फिल्म ‘हाम साथ साथ है’ को सुटिङका क्रममा सलमान खानलाई कालो हरिण मारेको आरोप लागेको थियो । यही केसमा उनलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेका थियो भने उनी पाँच दिनसम्म जेलमा बसेका थिए । २२ सेप्टेम्बर १९९८ मा उनको सुत्ने कोठाबाट एक रिभल्बर र राइफल भेटिएको थियो । यही मामलामा ललित बोहोरा भन्ने व्यक्तिले जोधपुरको लुणी पुलिस थानामा १५ अक्टूबर १९९८ मा पहिलो एफआईआर दर्ता गरेका थिए । त्यही एफआईआरमा लिखिए अनुसार सलमान खानले अक्टोबर १ र २ १९९८को मध्य राति कांकणी गाउँको सिमानामा दुई कालो हरिण मारेका थिए ।
कालो हरिण भारतमा लोपोन्मुख जीव मानिन्छ र त्यसलाई सरकारले संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ ।
२० वर्षदेखि चलेको मुद्दामा सलमान पटक पटक अदालतमा उपस्थित हुँदै आएका थिए । पछिल्लो समय मुद्दा दर्ता गरेको पक्षबाट ५१ जनाको सूची कोर्टमा दर्ता गरेकोमा त्यसमध्य २८ जनाको बयान लिइएको थियो । विपक्षीको तर्फबाट पनि बचाउका लागि दस्तावेज पेस भएको थियो । त्यसपछि २८ मार्चमा अन्तिम बहस भएको थियो ।
अदालत को फैसला सलमानको बिपक्षमा आएसंगै पक्षधरहरुले खुशीयाली मनाएका छन ।
अभिनेता सलमान खान जमानतमा रिहा
२०७४, २४ चैत्र शनिबार २२:१५
‘ए मेरो हजुर ३’मा सलिन र साम्राज्ञी नहुने
२०७५, १० बैशाख सोमबार ११:४९
हितेश बिरही बराम को दोश्रो गीति एल्बम मोहनी बोलीमा बजारमा
२०७६, २४ आश्विन शुक्रबार १५:१८
२०७५, २ बैशाख आईतवार १३:५९
२०७५, १० बैशाख सोमबार ११:२२
चलचित्र ‘चङ्गा’को ‘कम्पनी माला’ गीत सार्वजनिक